IPanda Bear: phakathi kothando nokwesaba | Izindaba Zokuhamba
UMaria Jose Roldan | | China, Ukuzilibazisa, Ukuhamba kwe-Asia
Izwe elikhulu kunawo wonke emhlabeni, iChina, linesilwane sendabuko esibhekwa njengonkulunkulu uqobo: iPanda Bear, isilwane esincelisayo esidlayo esidabuka kulelizwe elisempumalanga. Zivakashelwa kakhulu ema-zoo, hhayi ezendawo kuphela, kodwa nakwezinye izikhungo eziningi zomhlaba. IPanda Bear ithandwa kakhulu kangangoba ilogo yesikhwama somhlaba esivikela izilwane, iWWF.
Kuyaziwa ukuthi okwamanje lesi silwane sisengcupheni yokuqothulwa. Izikhathi eziningi kungabonakala njengesilwane esizolile nesingenacala, kepha kwezinye izikhathi singaba esinye sezingozi kakhulu ezikhona emhlabeni wethu.
1 Ibhere le-panda
2 Isitha sepanda
3 Ngabe i-pandas iyahlasela?
4 Izindaba ezimayelana nepanda bear uGu Gu
5 Ipanda lithwale uGu Gu
Ibhere le-panda yisilwane esihle, esikhulu okuthi ngokubukeka kwaso ngokungangabazeki sibukeka njengesilwane esikhulu esishuthekiwe, kodwa kungaphezu kokubukeka. Ibhere le-panda linesifiso esingahluthiseki ngoqalo, imvamisa lidla isigamu sosuku: ukudla okuphelele kwamahora ayi-12. Imvamisa udla amakhilogremu angama-13 oqalo ukuze ahlangabezane nezidingo zakhe zansuku zonke zokudla futhi akhiphe iziqu ngamathambo akhe esihlakaleni, avulekile futhi asebenza njengezithupha. Kwesinye isikhathi ama-panda nawo angadla izinyoni noma amagundane.
Ama-pandas asendle avame ukuhlala ezindaweni eziqhelile, ezinezintaba maphakathi neChina. Lokhu kungenxa yokuthi kulezi zindawo kunamahlathi aphakeme kunayo yonke futhi analesi sitshalo ngendlela entsha nenomswakama, into abayithandayo. AmaPandas angakhuphuka akhuphuke phezulu ukuze ondle lapho izitshalo ziyindlala, njengasehlobo. Imvamisa badla behleli phansi, behleli ngokukhululeka futhi belule imilenze yabo yangemuva. Yize bebukeka behleli nje akusikhona ngoba bangongcweti bemithi futhi bayabhukudi abasebenza kahle kakhulu.
Amabhande wepanda zizodwa futhi zinomqondo othuthuke kakhulu wephunga, ikakhulukazi kwabesilisa ukugwema ukuhlangana nabanye futhi ngaleyo ndlela bakwazi ukuthola abesifazane futhi bakwazi ukukhwelana entwasahlobo.
Lapho abesifazane bekhulelwa, ukukhulelwa kwabo kuthatha izinyanga ezinhlanu futhi zizala izinyane noma amabili, nakuba zingakwazi ukunakekela ezimbili ngesikhathi. Izingane zePanda aziboni futhi zincane kakhulu lapho zizalwa. Izingane zePanda azikwazi ukukhasa kuze kufike ezinyangeni ezintathu, yize zizalwa zimhlophe futhi zivame ukuthuthukisa umbala omnyama nomhlophe ngokuhamba kwesikhathi.
Namuhla kunama-pandas angaba ngu-1000 endle, cishe angama-100 ahlala emawini. Konke okwaziwayo namuhla ngama-pandas kubonga labo abasekuthunjweni ngoba kunzima ukuthola ama-pandas asendle. Yize kunjalo, indawo engcono kakhulu yebhere le-panda, njenganoma yisiphi isilwane, isendaweni yayo hhayi e-zoo.
Imvamisa abavame ukuba nezitha eziningi ngoba imvamisa azikho izidlakela ezifuna ukuzidla. Noma kunjalo isitha sakhe esikhulu ngumuntu. Kukhona abantu abafuna ukuzingela ama-pandas ngezikhumba nemibala yabo eyingqayizivele. Ukubhujiswa kwabantu kubeka engcupheni indawo yabo yokuhlala engokwemvelo futhi lokhu kuyisongo esikhulu kunazo zonke futhi kubasunduzise emaphethelweni okuqothulwa.
Esinye isitha kungaba ingwe yeqhwa. Kuyisilwane esidla inyama esingabulala amawundlu epanda lapho umama ephazanyiswa ukuwadla. Kepha uma umama ekhona, ingwe ayinasibindi sokuhlasela ngoba iyazi ukuthi ibinganqotshwa kalula.
Ngabe i-pandas iyahlasela?
Ukuhlaselwa kwePanda akuvamile njengoba kugwema abantu nezindawo abahlala kuzo. Ipanda lasendle akuvamile ukuthi lixhumane nomuntu, yize ipanda elithukuthele ngoba lithukuthelisiwe noma ngenxa yokuthi amaphuphu alo aphazamisekile angahlasela ukuze azivikele.
Kuma-zoo, amabhere e-panda ayathandeka kepha yize kuyivelakancane, angahlasela uma ezizwa ehlaselwe noma ephazamisekile. Noma zibukeka njenge-teddy bear, kufanele zihlonishwe njengezinye izilwane zasendle.
Izindaba ezimayelana nepanda bear uGu Gu
Ezikhathini eziningana izindaba ezifika ngamaPandas Bears ziyamangalisa. Abaningi bakuthola kunzima ukugaya ukuthi lesi silwane esibonakala singenabungozi sinzima kangako. Enye yezindaba ezinjalo yilokho okwenzeka kuZhang Jiao, 28. Indodana yakhe ilahle ithoyizi lakhe lapho bekukhona khona iPanda Bear okuthiwa uGu Gu, futhi lapho ezama ukuyithola, wahlaselwa kanzima yiyo.
UMnu. Jiao wahlupheka ngenkathi isilwane siluma umlenze wakhe, kodwa okumangaza kakhulu kunakho konke ukuthi akenzanga lutho ukulwa nalomonakalo. Ngani? Hhayi ngoba njengamazwe amaningi asempumalanga, uyihlonipha kakhulu iPanda Bear, ayithatha njengengcebo kazwelonke. Uqinisekisa ukuthi bahle nokuthi uyajabula ukuthi bahlala bedla uqalo ngaphansi kwezihlahla. Yeka isimo sengqondo sokumangalisa ngokwengeziwe!
Into enelukuluku kunayo yonke ukuthi uma i-zoo ifisa, ingamthathela izinyathelo uZhang Jiao ngokungena endaweni evinjelwe abantu, njengendawo yePanda Bear.
Ipanda lithwale uGu Gu
Kubalulekile ukusho ukuthi iBhele Gu Gu selivele lafika nomlando wokuhlasela abantu. Ngonyaka ngaphambi kwalesi sehlakalo esibuhlungu noZhang, lesi silwane okukhulunywa ngaso sahlasela ingane eneminyaka eyishumi nanhlanu kuphela ngokukhuphukela emikhawulweni yendawo lapho isilwane sasikhona. Futhi eminyakeni embalwa edlule, wahlasela umuntu wakwelinye izwe owayedakiwe ngoba wamgona.
Nakanjani izilwane zingokwemvelo futhi azihlaseli ngenjabulo kodwa ngoba bazizwa besatshiswa futhi ukuphela kwendlela yabo yokuzivikela. Kodwa-ke, kubo bonke labo ababecabanga ukuthi iPanda Bear yayiluhlobo lwesilwane esigxishiwe, isidalwa esizolile futhi esimnandi, sebebonile ukuthi kungcono ukuhlala beqaphile futhi bahloniphe imiyalo yama-zoo.
Ubuwazi ukuthi cishe ngama- $ 100 ungaba nePanda Bear eduze futhi uhlanganyele nayo? Yebo, kuthiwa bakhuliswe kahle futhi baqeqeshiwe endaweni yokugcina indawo banobungane kakhulu. Kepha kungcono kwesinye isikhathi ubashiye bezolile futhi bakhululekile ukungatholi ukuhlaselwa kwakhe, okungagcina sekwenze umonakalo empilweni yakhe yonke, noma okubi kakhulu, ekufeni.
Usuvele uxwayisiwe, bavakashele kodwa ngiyacela, ngokunakekela okukhulu nangothando.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuhamba kwe-Asia » China » IPanda Bear: phakathi kothando nokwesaba
Nginonina wami kusho
Okuthunyelwe okuhle! Ngiyifundile nomshana wami oneminyaka engu-8 ngoba besinokungabaza ukuthi ipanda lingahlasela abantu.
Siyakuhalalisela ngokushicilelwa okuphelele, kusisizile ukuthi sifunde okuningi ngama-pandas! Ngiyabonga! 🙂
Phendula Ngonina Wami
Ukubhala okuhle kakhulu, iqiniso elihle kakhulu, bengifuna nokwazi ukuthi ama-panda angaba nobutha yini, yize kusobala ukuthi angavela emndenini we-ursidae noma kunjalo, ibhere elinesisindo esingaphezu kwamakhilogremu angama-200 lingakwenza umonakalo omkhulu ngokushaywa okukodwa i-paw yayo iqiniso, ngendlela iChina okuyizwe elinendawo enkulu kunazo zonke ehlala abantu kepha hhayi enkulu kunazo zonke okungaba yiRussia
IPalmyra, isimangaliso sogwadule lwaseSyria